Inona ny tombontsoa sy ny fanimbana ny paoma
Apple dia tena be mpitia sy malala izay manatrika ny sakafo isan-taona amin'ny dikan-teny samihafa. Amin'ny fotoam-piravoravoana, afaka mihinana amin'ny voankazo na voamaina ianao, ary amin'ny fotoana mangatsiaka dia misy karazana banga. Mba hahafahan'ny apples hitondra soa sy voka-dratsy fotsiny dia mila mandinika fetra maromaro ianao.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny paoma: fampiasana sy fanoherana
Apple sy ny voaloboka, ny banana, ny mangona ary ny lokanga dia iray amin'ireo vokatra dimy sy malaza indrindra eran-tany. Ho an'ny latabatsika, ny apple dia ny voa iray isa. Mahafantatra ny tsirony amin'ny fahazazany isika ary mahafantatra fa ny tombotsoan'ny apples dia tena goavana. Ny lehilahy dia mamboly hazo paoma mandritra ny arivo taona.
Fitsipika momba ny famokarana hazo pòm amin'ny lohataona: rehefa manomboka, ny fomba famolahana, ny fahadisoana lehibe rehefa mamboly
Raha te hamboly kobam-bary iray eo amin'ny teti-bola ianao na hamboly hazo iray monja, ary mahazo voly be dia be, dia azonao aloha ny mamantatra ny fomba hanaovana azy tsara: Ahoana no hambolena hazo pòm, raha tokony hambolena amin'ny lohataona, inona no toerana hofidiana, inona no tetika stick and t.
Ny apples Rannetki: famaritana, endri-javatra, fambolena
Ny applet rannet dia hita any amin'ny zaridaina maro, indrindra any Siberia. Ity voankazo dia antsasaky ny savony, saingy ny paoma dia tsy mamery ny fanandramany mamirapiratra sy ny fampisehoana. Ny hazo papaly iray dia heverina ho hazo fihinam-boa-tsoa, ​​ary amin'ny fikarakarana sahaza azy dia afaka mitondra voankazo mandritra ny 15 taona. Raha manao fanatanjahan-tena tsy tapaka sy fisorohana aretina sy aretina ianao dia afaka mahita vokatra tsara mandritra ny taona maro.
Ahoana no hanaovana divay apetraka?
Rehefa tonga avy hatrany ny teny hoe "divay" eo amin'ny lohany, dia misy fikambanana miaraka amin'ny voaloboka. Ny divay no tena endrika malaza indrindra amin'ny zava-pisotro misy alikaola. Nefa tsy dia tsara sy mahasoa loatra amin'ny dingam-pahalalana azo itokisana avy amin'ny tsaramaso sy voankazo hafa. Androany dia miresaka momba ny fomba hanaovana divay apetraka isika. Ny tombony sy ny fahasimban'ny vokatra Apples dia tena manan-karena amin'ny vitamina sy zavatra hafa mahasoa.
Ahoana ny fihazonana ireo paoma raha vao manomboka
Rehefa lehibe ny fijinjana, dia manontany tena isika hoe ahoana no fomba hitehirizana ireo paoma ho an'ny ririnina. Matetika ny dingana dia toa mora, fa raha ny marina dia maro ny tranga sy fitsipika, ny tsy fahombiazan'ny fanarahana izay mety hitarika ny fahaverezan'ny ankamaroan'ny vokatra. Noho izany dia zava-dehibe ny mahafantatra momba ireo karazana pòm rehetra miaraka amin'ny kalitao tsara indrindra, ary koa ny fepetra fitehirizana sy fanodinana.
Sakafo sy zava-tsarobidin'ny fihinana apples efa voamaina ho an'ny ririnina
Apples - iray amin'ny karazana voankazo mahazatra indrindra sy mahasalama indrindra eo amin'ny toeram-pivarotana sy fivarotana any an-tsena. Samy hafa amin'ny tsiro sy ny habeny izy ireo, ary ny lovia vita avy amin'izy ireo dia mendrika ny sakafo cookbook. Raha ny marina, vokatra tsara sy matsiro dia tsy azo sakaina afa-tsy ny mena ihany, fa manomana karazana jams, pies, mofo ao anaty lafaoro, maina ary maina.
Apple Moonshine ao an-trano
Ny lambondrianana Apple dia heverin'ny maro ho tsara indrindra amin'ny fisotroana. Ary ny tena zava-dehibe - ny tena sarobidy indrindra, satria ny zaridaina rehetra dia mitombo amin'ny apples, ary amin'ny ririnina dia azo vidiana io voankazo io tsy misy vidiny. Misy ny nuance kely - ny fomba tsara indrindra. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny manondraka mooneyhine avy amin'ny vokatra rehetra, fa ny paoma izay tena sarobidy noho ny tsirony sy ny tsirony mahatalanjona.
Ny fampiasana apples bake ilaina amin'ny fahaverezan'ny lanja, mandritra ny fitondrana vohoka ary amin'ny toe-javatra hafa
Hoy ny ohabolana anglisy: "Mihinàna sakafo 1 apple a day ary ho salama ianao." Ny voa dia tena salama tsara, izay ankoatry ny olon-drehetra ihany koa. Androany no hiresahantsika ny paoma vita amin'ny bakteria - mahasoa, ahoana ny fiantraikany amin'ny taova sy ny fomba fiasa samihafa, ary koa ny fitsipika sy fitsipika momba ny fampiasana vokatra toy izany.
Ahoana ny famongorana ny jiro apetraka tsy misy mpanao gazety sy mpanadio any an-trano
Ny kamo dia tsy mahafantatra ny tombontsoa avy amin'ny sokatra voankazo sy legioma. Saingy tena ilaina ve ny sira izay atolotra ao amin'ny magazay? Androany dia hiresaka momba ny fikarakarana ny jiosy pèl isika amin'ny fanampiana ny fitaovana tsotra fanatsarana, ary ny tombony ho an'ny fitahirizan-jaza ao anaty kitapo. Ny voamaina na voasesika voasesika ao anaty kitapo dia mamokatra vokatra faharoa, izany hoe vita amin'ny fitaovana miorim-ponenana aorian'ny famerenana mivantana ny voankazo.
Ny singa, tombony, sakafo ho an'ny jiro apetraka
Vitsy no handà ny tombotsoan'ny japoney. Inoana fa raha mihinam-be iray isan'andro ianao dia afaka manadino ny aretina sy ny fitsidihana ny dokotera mandritra ny fotoana maharitra. Inona no azoko ambara momba ny jiosy apetraka - fifantohana ny zavatra ilaina avy amin'io voankazo io. Apemba no misy ao amin'ny faritra misy anay saika isan-taona, manana vidiny ambany sy azo ekena, satria afaka mahazo alikaola ny olona rehetra.
Ahoana ny fomba fanaovana fitafy apetraka amin'ny vodka (amin'ny toaka)
Ny olona rehetra dia maheno ny soa azo avy amin'ny paoma ho an'ny vatan'olombelona, ​​izay tsy azo lazaina momba ny toaka mahery. Na dia matetika aza ireo hevi-dratsy rehetra mihantona aminy dia mifamatotra amin'ny fanararaotam-pahefana sy ny kalitao, saingy ny laza lazain'ny alika dia tsara kokoa noho ny teny mahafinaritra momba azy. Fa raha mampifangaro paoma amin'ny alikaola ianao ao anaty tapa-koditra vita amin'ny vodka, dia mahazo zava-pisotro lehibe eo amin'ny vokatra izahay, izay mitahiry ireo toetra tsara indrindra amin'ny paoma sy ny positive, izay mbola misy ao amin'ny toaka.
Ahoana no anaovana applesauce amin'ny ronono voadio: dingana tsikelikely amin'ny sary
Ity fantsom-pofona matsiro ity amin'ny endriky ny puupa misy ronono vita amin'ny ronono dia tena malemy amin'ny tsiro, indraindray antsoina hoe "sissy". Tsara ho an'ny pancakes, pancakes ary ny tsindrin-tsakafo sasany. Azonao atao ny mametraka izany toy ny famenoana pies na manamboatra lay ao anaty mofo, na afaka mihinana miaraka amin'ny sotro iray. Ny fikojakojana toy izany dia mora mofomamy ao anaty fatana na ao anaty lavaka mangotraka.
Ahoana ny handraisanao ny pèl "Five minitra": dingana isan-karazany amin'ny sary
Ny lazan'ny pòm jam "Pyatiminutka" dia nohazavaina, voalohany indrindra, amin'ny fotoana fohy ny fitsaboana azy, izay ahafahana mitahiry amin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny vokatra mahasoa ny voankazo mamorona azy. Ankoatr'izay, ny tsiambaratelo tsotra izay tsy mitaky fahaizana ara-tsakafo manokana, miaraka amin'ny vokatra mahafinaritra mahavelona, ​​dia mahatonga ity vokatra ity ho iray amin'ireo malaza indrindra ao an-tokantrano.
Ny fomba hanamboarana menaka amin'ny paoma: resipe miaraka amin'ny sary
Ny fomba mahavariana indrindra hitehirizana apples dia mahandro azy ireo. Ny tsirony mahafinaritra sy ny tsirony malefaka dia hampahatsiahy ny fahavaratra ary hampiseho fahafinaretana marina. Hanolotra fomba tsotra sy mahatalanjona mandritra ny alina ity sakafo mahavelona ity izahay. Momba ny fanandramana Hanamboatra apokalipsy, tsy ilaina ny mifidy varimbazaha mahafinaritra.
Harona Apple: mikarakara tsiambaratelo ao an-trano
Ny ririnina dia fotoana iray hanomanana sakafo isan-karazany amin'ny fety maro. Mitranga izany fa reraka amin'ny akanjo volom-paty i Olivier sy ny tariny - te-hanandrana zava-baovao aho, nefa koa mampiasa vokatra mahazatra sy sarobidy, toy ny paoma. Azonao atao ny manondro ny fomba fitsaboana hafa firenena. Ohatra, makà rameva.
Manaova parda ao anaty lavaka mangatsiatsiaka: dingana isan-kerinandro
Apple, mazava ho azy, dia iray amin'ireo vokatra malaza indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ankoatra ny fampiasana vaovao, vokatra isan-karazany dia vita avy amin'ireo voankazo ireo: varahina, fitehirizana, voankazo maina, sns. Ny fampiasana ny multicooker dia manamora ny fizotran'ny fanomanana azy - hojerentsika ny endri-javatra ao amin'ilay lahatsoratra.
Mamolavola apple jam ao anaty lavaka mangotraka
Ampitao ny dite mafana amin'ny alin'ny ririnina mafana ary manome fahatsiarovana mafana amin'ny ranomandry efa somary mangatsiaka. Ny tsindrin-tsakafo amin'ity tsingerim-biriky amber, matevina sy aromatika ity dia be dia be ary samy tsotra avokoa izy ireo miomana, fa kosa, voankazo ao anaty lavaka mangatsiatsiaka dia tsy miteraka zava-mahadomelina intsony izy ary ho tena tsara sy mahasalama.